Fiarahana ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana sy mamorona ny fianakaviana | "planeta Fitiavana"
Fiarahana ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana sy mamorona ny fianakaviana | «planeta Fitiavana»
Tao anatin’ny taona vitsivitsy, bebe kokoa faly mpivady hita noho ny Internet. Ny zavatra tena mahaliana momba izany dia ny hoe toy izany ny sendikà dia matanjaka kokoa, mahay mandanjalanja sy azo antoka noho ny olona izay nihaona ny fomba nentim-paharazana. Ny zavatra dia vita fanoloran-tena Mampiaraka toerana ho an’ny fifandraisana matotra manana be dia be ny tombontsoa. Voalohany indrindra, izany dia mahakasika ny fifidianana ny mpiara-miasa — tamin’ny voalohany ianao dia afaka mitady interlocutors amin’ny isan’ny-dehibe ny lafiny. Ny tranonkala endri-javatra tsy manam-paharoa ny rafitra izay ahitana ny mihoatra ny zato ny masontsivana. Noho izany fifandraisana Mampiaraka dia ho tena mahavokatra, satria indray mandeha ianao dia afaka maka ny isan’ny kandidà sasany ny fiainana ny soatoavina, ny zavatra tiany, ny fahaiza-manao, ny fihetsika sy ny zavatra mahaliana. Afaka manomboka ny Fiarahana ho an’ny fifandraisana matotra tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana, fa izany fomba izany dia tsy mba tahaka mahomby toy ny feno ny fisoratana anarana ao amin’ny tranonkala. Izany dia manome fahafahana anao mba hamorona ny mombamomba azy sy hahazo ny fidirana amin’ny asa rehetra ny vavahadin-tserasera. Voalohany indrindra, izany no ilaina mba hahazoana antoka fa ny olona hafa afaka ny hahita Anao — ny tany am-boalohany fanontaniana be dia mampitombo ny mety tsy fahombiazana.
Raha toa ianao ka liana ihany ny Fiarahana ho an’ny fifandraisana matotra, dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra. tsy be loatra retouching — boly sary endrika afaka mamorona ny BEMIDINA iray na hosoka ny fahatsapana ny manafina tsy fetezana goavana mazava ho azy, ny tombana ny endriky ny interlocutor mitana anjara toerana manan-danja, satria misy ny safidy ny fiainana mpiara-miasa, dia ilaina mba hisarihana sy mankafy. Fa ny fifandraisana eo amin’ny tambajotra tsy manana ny simika fihetseham-po fa indraindray hanelingelina ny tena fifandraisana — noho izany mpiara-miombon’antoka dia nisafidy ny fahatsiarovan-tena, amim-pieritreretana, ary mifototra amin’ny tsoa-kevitra mitombina, tsy ny instincts, izay mitondra ho amin’ny tena ela voalanjalanja Union. Rehefa miresaka an-tserasera tsy misy famerana, tsy misy ny taona, fotoana na ara-jeografika ny votoatiny. Izany no zava-dehibe fa ny azy dia mora kokoa ny mandresy saro-kenatra ireo, izay no zava-dehibe indrindra ho an’ireo izay efa miatrika ny fitarainana, tsy fahombiazana, ary ny famoizana olon-tiana fitaka. Tsy miverina fotsiny hatoky ny olona — noho izany dia mila manomboka Mampiaraka maimaim-poana ho an’ny fifandraisana matotra sy tsikelikely, — katsaram-panahy sy amim-pilaminana, araka izay azo atao, ao ny vohikala natokana ho amin’izany. Tsy maro ny Mampiaraka toerana ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana maimaim-poana, fa ny loharano dia mamela anao mba mitady namana tena tsy misy vola fanampiny. Mahita ny fanahinao vady, ny olona rehetra dia afaka, raha toa ka matotra momba ny fikarohana an-toerana. Izany no soso-kevitra mba manome vaovao marina, amim-pahatsorana mamaly fanontaniana, fa tsy hanafina ny fisian’ny zaza, ny fifandraisana na lasa ny fanambadiana. Tsy misy ilaina ny milalao ny anjara asa sy mody fa rehefa afaka izany rehetra fahadiovam-po no fanalahidin’ny tena mafy ny fifandraisana. Izany dia tsy ilaina ho haingana, dia zava-dehibe mba hijery ny olona hafa alohan’ny hanendry ny fihaonana manokana. Planeta fitiavana — Mampiaraka toerana ho an’ny fifandraisana tsy misy na inona na inona fari-famerana.
Afaka maka ny mpiara-mitory amin’ny tanàna sasany sy ny faritra
Matetika ny fitiavana mahita olona avy amin’ny firenena sy kaontinanta samihafa — izany no fahafahana lehibe ho tsy hanatsara ny fiainany manokana ihany, fa tanteraka kosa ny tontolo izao amin’ny alalan’ny fanovana ifotony ny fomba fiainana. Iraisam-pirenena ny mpivady no tena fahita, izay tsy manamafy ny zava-misy fa ny olona rehetra eto amin’ity tontolo ity tanteraka ny vadiny, dia raha toa ka tena lavitra sy mba hihaona ny zava-tsarotra. Iza marina no mitady — izy foana no mahita, ary amin’ny tranonkala dia hanome ny ambony indrindra azo atao, mampiray ny fo
← Italia ankizivavy mampiaraka guide Free Download